ကိုဗစ်ကာလမှာပထမဆုံးရတဲ့အနုပညာကြေးနဲ့ မေမေ့ကိုကန်တော့ခဲ့တဲ့ အပြင် လိုအပ်နေသူတွေအတွက်ပါ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ချယ်ရီသင်း – XB Media Myanmar
ကိုဗစ်ကာလမှာပထမဆုံးရတဲ့အနုပညာကြေးနဲ့ မေမေ့ကိုကန်တော့ခဲ့တဲ့ အပြင် လိုအပ်နေသူတွေအတွက်ပါ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ချယ်ရီသင်း
June 29, 2020 Bestie_Author
ပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်ချယ်ရီသင်းကိုတော့ပရိသတ် ကြီး သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူမကတော့မကြာသေးခင်ကမှ*မ လို့ပဲခေါ်* ဆိုတဲ့ သီချ င်းလေးကိုထွက်ရှိထားပြီးအဆိုပါသီချင်းလေးကလည်းလူငယ်တွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ နေရာယူ ထားနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်းချယ်ရီသင်းဟာ အနုပညာအ လု ပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး
လက်ရှိမှာလည်း Producer ဦးကိုကိုနွယ်ကထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး အင်ပါယာMusic Band ကတီးထားတဲ့ U ဂျေ ရဲ့အောင်မြင်တဲ့တေးသီချင်းတွေနဲ့အတူ မိန်းခလေး (၁၀)ယောက်သီဆို ထား တဲ့အခွေလေးမကြာခင်ထွက်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ် ။
ယခုလိုကိုဗစ် ကာလမှာပထမဆုံးရတဲ့အနုပညာကြေးနဲ့ မေမေ့ကိုကန်တော့ခဲ့တဲ့အပြင် လို အပ်နေသူတွေအ တွက်ပါလှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါအကြောင်းလေးကို တော့ချယ်ရီ သင်းက” Producer ဦးကိုကို နွယ်ကထုတ်လုပ်ပေးထားပြီးအင်ပါယာ Music Band ကတီးထားတဲ့ U ဂျေ ရဲ့ အောင် မြင်တဲ့တေးသီချင်းတွေနဲ့အတူ မိန်းခလေး (၁၀)ယောက်သီဆိုထားတဲ့အခွေ လေးမ ကြာခင်ထွက်လာပါမည်
သမီးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပါဝင်သီဆိုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါသော Producer ဦးကိုကိုနွယ်နဲ့ U ဂျေကိုကျေးဇူးအထူးပါကဲဘယ်မမတွေပါမယ်ထင်ပါလဲ???ချယ်လေးကဘယ်သီချင်းဆိုမယ်ထင်လဲ???ကိုဗစ်ကာလမှာပထမဆုံးရတဲ့အနုပညာကြေးကိုလိုအပ်နေတဲ့လူတစ်ချိူ့အတွက်ဆေးဖိုးငွေအချို့လှူဒါန်းပေးပြီးမေမေ့ကိုကန်တော့ခဲ့ပါတယ်ချယ်လေးနောက်ပိုင်းကျရင်ရတဲ့အနုပညာကြေးထဲကနေတတ်နိူင်သလောက်လှူဒါန်းသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်”ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးသာဓုခေါ်လို့ရအောင်ပြန်လည်ဖော် ပြပေးလိုက်ပါနော်…
ပရိသတ္အားေပးမွုကိုအခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ အဆိုေတာ္ခ်ယ္ရီသင္းကိုေတာ့ပရိသတ္ ႀကီး သိၿပီးသားျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ သူမကေတာ့မၾကာေသးခင္ကမွ*မ လို႔ပဲေခၚ* ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေ လးကိုထြက္ရွိထားၿပီးအဆိုပါသီခ်င္းေလးကလည္းလူငယ္ေတြရဲ့ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေနရာယူထားနို င္တဲ့အထိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာလည္းခ်ယ္ရီသင္းဟာ အႏုပညာအလုပ္ေတြ ကို ဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး
လက္ရွိမွာလည္း Producer ဦးကိုကိုႏြယ္ကထုတ္လုပ္ေပးထားၿပီး အင္ပါယာMusic Band ကတီးထားတဲ့ U ေဂ် ရဲ့ေအာင္ျမင္တဲ့ေတးသီခ်င္းေတြနဲ႔အတူ မိန္းခေလး (၁၀)ေယာက္သီဆို ထား တဲ့အေခြေလးမၾကာခင္ထြက္လာနိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔သိရပါတယ္ ။
ယခုလိုကိုဗစ္ ကာလမွာပထမဆုံးရတဲ့အႏုပညာေၾကးနဲ႔ ေမေမ့ကိုကန္ေတာ့ခဲ့တဲ့အျပင္ လို အပ္ေနသူေတြအ တြက္ပါလွူဒါန္းေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါအေၾကာင္းေလးကို ေတာ့ခ်ယ္ရီ သင္းက” Producer ဦးကိုကို ႏြယ္ကထုတ္လုပ္ေပးထားၿပီးအင္ပါယာ Music Band ကတီးထားတဲ့ U ေဂ် ရဲ့ ေအာင္ ျမင္တဲ့ေတးသီခ်င္းေတြနဲ႔အတူ မိန္းခေလး (၁၀)ေယာက္သီဆိုထားတဲ့အေခြ ေလးမ ၾကာခင္ထြက္လာပါမည္
သမီးကိုယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ပါဝင္သီဆိုဖို႔ဖိတ္ေခၚေပးပါေသာ Producer ဦးကိုကိုႏြယ္နဲ႔ U ေဂ်ကိုေက်းဇူးအထူးပါကဲဘယ္မမေတြပါမယ္ထင္ပါလဲ???ခ်ယ္ေလးကဘယ္သီခ်င္းဆိုမယ္ထင္လဲ???ကိုဗစ္ကာလမွာပထမဆုံးရတဲ့အႏုပညာေၾကးကိုလိုအပ္ေနတဲ့လူတစ္ခ်ိဴ႕အတြက္ေဆးဖိုးေငြအခ်ိဳ႕လွူဒါန္းေပးၿပီးေမေမ့ကိုကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္ခ်ယ္ေလးေနာက္ပိုင္းက်ရင္ရတဲ့အႏုပညာေၾကးထဲကေနတတ္နိူင္သေလာက္လွူဒါန္းသြားဖို႔ရည္ရြယ္ထားပါတယ္”ဆိုၿပီးသူမရဲ့လူမွုကြန္ရက္မွာေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ႀကီးသာဓုေခၚလို႔ရေအာင္ျပန္လည္ေဖာ္ ျပေပး လိုက္ပါေနာ္…
“ေဒေဝါလို႕ စေနာက္တာေလးကို ခ်စ္စဖြယ္ေလး ျပန္လည္ ျပဳမူလိုက္ တဲ့ သားသားေလးကို ခ်စ္မဝျဖစ္ေန တဲ့ ပိုးအိအိခန္႕ရဲ႕ ဗီဒီယိုဖိုင္
ဇွဲကပင်တောင်မှာ ဘဝတစ်ပါး ကူးပြောင်းသွားတဲ့ မိန်းကလေးအ တွက် မခံစားနိုင်လွန်းလို့ ငိုချင်လာ တယ်ဆိုတဲ့ ဇေရဲထက်
မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်မိဘနှစ်ပါးကို သိန်း(၅၀၀)နဲ့အတူရိုသေစွာ ကန် တော့ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်စိန်လင်း October 28, 2020
ခင်လှိုင်ကို အားကျပြီး ပေါက်ကရလုပ် မိလို့မိန်းမဆူတာခံလိုက်ရတဲ့ အကြော င်း လေးကို ပြောပြလာတဲ့ မင်းညီ October 28, 2020
အသက် (၂၀) ပြည့်မွေးနေ့မှာ ဖွား ဖွား ကြီးချိုပြုံးနဲ့အတူတူ ကိုယ်တိုင် မုန့် ဖုတ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း လှူ ဒါန်း ဖြစ်ပုံလေးကို မျှဝေပေးလာတဲ့ ဝင်းခန့်မိုး October 28, 2020
သမီးလေး တောင်းဆိုတိုင်း လိုက်ပြီး မလုပ်ပေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို ပြော ပြလာတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ October 28, 2020
မကြာသေးခင်ကမှ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ ရည်းစားဟောင်းသိအောင် စကား လေးတစ်ခွန်းကို ပြတ်ပြတ်သားသား အမှာပါးလိုက်တဲ့ ပိုပို October 28, 2020
(၂၀၂၁) ရဲ့အလှဆုံးသတို့သမီးလေး အဖြစ် မြင်တွေ့ရမယ့် ဝတ်မှုန်ရွှေရည် October 28, 2020
လင်မယားနှစ်ယောက် အခန်းခွဲပြီး အိ ပ်နေကြရတဲ့ အကြောင်းကို ပြော ပြ လာ တဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် October 27, 2020
ညီမဖြစ်သူ ငွေမှုံရတီအတွက် သိန်း (၂၀)ကျော်တန်ဖိုးရှိ နောက်ဆုံးပေါ် အိုင်ဖုန်း လက်ဆောင်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ ရွှေမှုံရတီ October 27, 2020
မြူးကြွတဲ့ သီချင်းလေးအတိုင်း စည်း ချက်ကျကျကခုန်ပြီး သီချင်းလေးတွေ လိုက်ဆိုနေတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးရဲ့သား လေး Liam ရဲ့ ချစ်စဖွယ် ဗီဒီယို October 27, 2020
မင်္ဂလာသက်တမ်း (၁၇) ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ R ဇာနည်နဲ့ ဝမ်း October 27, 2020